Ka ikuku siri ike na-arụ ọrụ zuru oke, ọ ghaghị ịhazi ya. Tụkwasị na nke ahụ, ntọala ziri ezi ga-eme ka ọ hụ na ọ bụ ọrụ ngwa ngwa ma kwụsie ike, kamakwa ịgbatị ọrụ ndụ ya. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi na kpọmkwem ntọala dị mkpa maka SSD. Usoro nke ịmepụta SSD maka iji na Windows Anyị ga-eleba anya na ịmepụta SSD site na iji ihe atụ nke sistemụ arụmọrụ Windows 7.
Kedu ndụ ndụ nke SSD draịva?
Mgbe ị na-ahọrọ ụgbọala maka usoro gị, ndị ọrụ na-ahọrọ karịa SSD. Dị ka a na-achị, nke a na - emetụta nke abụọ - nnukwu ọsọ na ezigbo ịdabere. Otú ọ dị, e nwere otu ọzọ, nke dị oke mkpa - nke a bụ ndụ ọrụ. Taa, anyị ga-agbalị ịchọta oge ole nrụgide siri ike ga-akwụsị.
Ebumnuche 1: Akwụghị disk ahụ. Ọ na - emekarị ka ọ ghara ịmepụta diski ọhụrụ mgbe ejikọrọ ya na kọmpụta na, dịka nsonaazụ, anaghị ahụ ya na usoro. Ihe ngwọta bụ ime usoro ahụ na usoro ntụziaka dịka algorithm na-esonụ. Pịa n'otu oge "merie R" na igosipụta window tinye compmgmt.
Ihe mgbokwasị nke diski ọ bụghị nanị na-enye aka iji weghachite usoro iji rụọ ọrụ na mmemme na data niile, ma na-enyekwa gị ohere ịkwanye n'otu disk gaa na nke ọzọ, ma ọ bụrụ na mkpa dị otú a. Karịsịa mgbe ọ na-ejikarị cloning nke draịvị mee ihe mgbe ị na-edochi otu ngwaọrụ ọzọ. Taa, anyị ga-eleba anya na ngwaọrụ dị iche iche ga-enyere gị aka ịmepụta clone SSD n'ụzọ dị mfe.
Lelee SSD maka njehie
N'oge arụ ọrụ nke ọ bụla ụgbọala na-agafe oge, ụdị dịgasị iche iche nke njehie nwere ike ịpụta. Ọ bụrụ na mmadụ nwere ike igbochi ọrụ, mgbe ahụ ndị ọzọ nwere ike iwepu diski ahụ. Ọ bụ ya mere ọ na - atụ aro ka ị nyochaa diski. Nke a ga - ọ bụghị naanị ịmata na idozi nsogbu, kamakwa n'oge iji detuo data ndị dị mkpa na onye a pụrụ ịdabere na ya.
Nyocha SSD ọsọ
Kedu ụdị ọsọ onye na-emepụta na-akọwapụta na njirimara nke SSD, onye ọrụ na-achọ mgbe niile ịlele ihe niile na-eme. Ma ọ gaghị ekwe omume ịchọpụta otú ọsọ ọsọ ọsọ ga-esi bụrụ onye a kpọsara na-enweghị enyemaka nke mmemme ndị ọzọ. Ogo kachasị nke a ga-eme bụ iji tụnyere otú ngwa ngwa na faịlụ dị na diski siri ike na-esere ya na nsonaazụ yiri ya site na bọtịnụ magnet.
NAND flash ụdị ebe nchekwa
Ka ọ dị ugbu a, ọtụtụ ndị ọzọ na-ewu ewu bụ ịnweta ígwè ọrụ siri ike ma ọ bụ SSD (S olid S tate D rive). Nke a bụ n'ihi eziokwu ahụ bụ na ha nwere ike inye ma ọ bụrụ na ha nwere ike ịgụ akwụkwọ na-agụ ederede ma dị mma. N'adịghị ka draịva siri ike, ọ dịghị akụkụ ọ bụla na-akpụ akpụ, na nchekwa nchekwa pụrụ iche - NAND - ejiri iji chekwaa data.
Ịnyefe usoro sitere n'aka otu SSD ọzọ
Mkpa ịkwafe sistemụ arụmọrụ site na otu ụgbọala siri ike na steepụ na onye ọzọ na-enweghị ntinye ya na okwu abụọ. Nke mbụ bụ ngbanwe nke usoro mbanye ahụ na onye ọzọ dị ike, na nke abụọ bụ ngbanwe nke a gbanwere maka mgbada nke àgwà. N'inye nkesa SSD n'etiti ndị ọrụ, usoro a dị mkpa.
Gbanwee ụgbọala DVD ka ọ bụrụ ụgbọala siri ike
Ọ bụrụ na ị kwụsịrị iji DVD rụọ ọrụ na laptọọpụ gị, mgbe ahụ ọ bụ oge iji dochie ya na SSD ọhụrụ. Ị maghị na i nwere ike? Mgbe ahụ, taa, anyị ga-ekwu n'ụzọ zuru ezu banyere otu esi eme nke a na ihe a chọrọ maka nke a. Otu esi etinye SSD kama disk DVD na laptọọpụ Ya mere, mgbe anyị tụlechara uru niile na nkwonkwo, anyị bịara kwubie na ngwa ikuku ahụ adịlarị nke ọma na ọ ga-adị mma itinye SSD kama.
Họrọ SSD maka kọmputa gị
Ugbu a, SSD na-eji nwayọọ nwayọọ dochie draịva siri ike. Ọ bụrụ na ọ bụ n'oge na-adịbeghị anya, SSDs dị obere ma, dị ka usoro, eji iji wụnye usoro, ugbu a enweela disks nwere ike nke 1 terabyte ma ọ bụ karịa. Uru nke ngwa ndị dị otú ahụ doro anya - ọ bụ mkpọtụ, nnukwu ọsọ na ntụkwasị obi.
Aro maka ịhọrọ SSD maka laptọọpụ
Otu ụzọ iji melite arụmọrụ ederede bụ iji dochie diski ike na diski siri ike (SSD). Ka anyị gbalịa ịchọta ụzọ isi mee nhọrọ dị mma maka ngwaọrụ nchekwa dị otú ahụ. Ihe bara uru nke ngwa ngwa siri ike maka laptọọpụ A na-enwe ike ịdabere na ya, karịsịa, nkwụsị nkwụsi ike na ọrụ dịgasị iche iche nke okpomọkụ.
Ịgbanwe nchekwa diski mgbe nile na SSD nwere ike ịme ka nkasi obi dịkwuo mma ma hụ nchekwa nchekwa data. Ọ bụ ya mere ọtụtụ ndị ọkachamara ji agbalị iji dochie anya HDD na ngwa ngwa siri ike. Otú ọ dị, iji dochie ụgbọala, ị ghaghị ịmegharị sistemụ arụmọrụ gị na usoro mmemme.
Ndị na-arụ ọrụ na laptọọpụ na-echekarị ma ụgbọala ma ọ bụ ụgbọala siri ike na-aka mma. Nke a nwere ike ịbụ n'ihi mkpa iji melite ọrụ PC ma ọ bụ ọdịda nke onye na-ahụ maka ozi. Ka anyi gbalịa ichota onye kacha mma. A ga-atụnyere njikọ ndị dị otú ahụ dị ka ọsọ ọsọ, mkpọtụ, ndụ ọrụ na ntụkwasị obi, njikọ njikọ, olu na ọnụahịa, ike ikike na nchịkwa.
Anyị jikọọ SSD na kọmputa ma ọ bụ laptọọpụ
Ijikọta ngwaọrụ dị iche iche na kọmpụta siri ike maka ọtụtụ ndị ọrụ, karịsịa ma ọ bụrụ na ekwesịrị itinye ngwaọrụ ahụ n'ime sistemụ ahụ. N'ọnọdụ dị otú ahụ, ọtụtụ wires na njikọ dị iche iche na-atụ egwu. Taa, anyị ga-ekwu banyere otu esi ejikọ SSD na kọmputa.
Achọrọ m faịlụ nkesa na SSD
Site na iji faịlụ paging, Windows 10 sistemụ arụmọrụ nwere ike ịgbasa ọnụego RAM. N'ọnọdụ ebe ọnụego nke ndụ dị, Windows na-emepụta faịlụ pụrụ iche na diski ike ebe a na-ebugo akụkụ nke mmemme na faịlụ data. Site na mmepe ngwaọrụ nchekwa data, ọtụtụ ndị ọrụ na-eche ma ọ bụrụ na a chọrọ faịlụ a maka SSDs.
https://termotools.com ig.termotools.com © SSD 2020